Warbixinta TÜBİTAK Channel Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWarbixinta TÜBİTAK Channel Istanbul
Fiiri sawirada Turhan
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul khudbadiisa waxaa soo agaasimay kanaalka Istanbul, TUBITAK'ın Channel Istanbul, isagoo tixraacaya warbixintii la helay. "Ma samayn kartid caawinaad laakiin haddii aad u doonayay Istanbul Canal ah waxaa la qaban doonaa," ayuu hadlayay warbixin TÜBİTAK on Madaxweynaha mashruuca Erdogan Kılıçdaroğlu ah, "waxaan TUBITAK ee Turkey ardayga ee hay'ad, Qodobka 14 kiis qoray in mashruuca waa immisa khaldan yahay," ayuu yiri. Hogaamiyaha CHP TUBITAK wuxuu faahfaahin ka bixiyaa Madaxweeyne kuxigeenka CHP Masuuliyada Xuquuqda Dabiiciga ah Gülizar Biçer Karaca ayaa sharxay.
Gudoomiye kuxigeenka CHP Masuuliyada Xuquuqda Dabeecadda Denizli kuxigeenka Gülizar Biçer Karaca, mashruuca Channel Istanbul, Xarunta Cilmi baarista ee TUBITAK Marmara (MAM) ayaa u dirtay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalaynta Ururinta EIA si ay ula socoto dhammaan faahfaahinta ay shacabka la wadaagto.
Gülizar Biçer Karaca Iyada oo loo adeegsaday caqli galkii oldu waan sameeyey,, majirto wax raaxo ah oo lagu hirgaliyo mashruuca Channel Istanbul, oo ka soo horjeedda caqliga iyo sayniska. Warbixinta Channel Istanbul EIA Report TUBITAK MAM diidmo ayaa lagu soo daray aragtida, kooxda aan khibrada laheyn ee TUBITAK waxay diyaarisay warbixinta EIA ma ahan mid cilmi ah 'ayuu yiri. Haddii kanaalka nolosha ku yimaado Istanbul, badda Marmara waxay dhammaaneysaa, jawiga deegaanka Badda Madoow wuu dillaacayaa.
halkan; Natiijooyinka ka soo baxay Warbixinta TUBITAK MRC, ee sida tooska ah u saameyn doona mashruuca Kanal Istanbul, oo ay Karaca ku qoran tahay wax:
* Macluumaadka ka hortagga saameynta deegaanka ee baarista iyo kabka ayaa ah mid aan ku filneyn oo aan lagu saleynin sal ku saleysan cilmiga.
90 Milyan oo m3 oo shey ah oo laga soo saarayo badda iyo dabaqa harada ayaan weli si faahfaahsan looga qorsheyneynin sida loogu dabaqi karo buuxinta badda iyo xulashooyinka ka sii baxaya badda.
Waxyaabaha lagu daadgureynaayo Badda Marmara aad ayey u sarreysaa qafis iyo kaarboon dabiici ah. Waxkaqabashada firfircoon ee dabiiciga ah iyo wasakhooyinka bini'aadamka / dabiiciga waxay halis ugu jiraan iney waxyeello u geystaan ​​deegaanka iyo deegaanka.
Sida ku xusan warbixinta falanqaynta TÜBİTAK, qashinka u baahan in lagu tuuro dhul ayaa la codsaday in lagu buuxiyo badda dhexdeeda Warbixinta EIA.
Ku daadinta qashin-qubka hoose ee qashin-qubka wuxuu leeyahay halis jidheed, kiimiko iyo bayooloji
Nadaafadda deegaanka ayaa lagu burburin doonaa aag ballaadhan oo ka badan sidii la filayay badweynta
Faafida ay keento dheecaan badan oo dheecaan leh ayaa ku faafido doona aagag waaweyn. Ma jiro wax macluumaad ah ama soo jeedin ah oo ku saabsan mowduucan.
Iyada oo kumanaan kun oo tan culeyskeeda dabiiciga ah, waxay si xun u saameyn doontaa isku dheelitirka oksijiinta ee Badda Marmara waxayna gabi ahaanba buuxin doontaa oksijiinta aagagga ay ka jiraan wareegga biyaha oo liita.
Walxaha la soo saaray ayaa halis ugu jira inay sababaan saameyn ba'an iyo ba'an oo ku dhaca coneerka biyaha badda ee Marmara iyo noolaha hoose.
Inta lagu guda jiro qulqulka harada Küçükçekmece iyo kanaal, waxyaabaha wasakhaysan waxay ku wasakhoobi doonaan durdurrada iyo dabaylaha iyo ion kala firidhsan, biraha iyo waxyaalaha dabiiciga ah waxay wasakhoobi doonaan aagga xeebta Badda Marmara.
Natiijo ahaan, waxaa la ogaaday in go'aan ka gaarista saamaynta bay'ada / deegaanka ay ku leedahay howlaha sahanka hoose ee warbixinta EIA uusan ku saleysanayn sal ku saleysan sayniska mana uusan fulinin khubarada saynisyahannada badda.
Biyaha ka yimaada Badda Madoow ilaa Marmaray, ugu yaraan laba jeer warbixinta lagu qiyaasay EIA ee daraasadda moodada, celcelis ahaan 2 km20 / sano oo biyo ah Badda Madoow ilaa Badda Marmara ayaa la go'aamiyay. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay ilo xog-ogaal ah, shaxdan ayaa noqonaysa ugu yaraan laba jeer 3km20 / sanadkii.
Waxaa jiri doona hal lakab (oo ka duwan nidaamka laba-lakabka ee Bosporus) laga bilaabo Badda Madoow ilaa Marmaray.
Tan waxaa loo malaynayaa inay carqaladeyso jawiga deegaanka guud ee Badda Marmara.
Cabbiraadda biyaha badda ee warbixinta EIA ma ku filneyn cabbiraadda iyo fahamka saameynta. Waxay u baahan tahay in lagu sameeyo saynisyahano badda (kiimik, jireed, oceanogragraafyooniya) macluumaad ka badan muddada dheer.
Xeebta galbeed ee Badda Madow ee Badweynta waa in ay ilaalisaa xeeb gaar ah oo dabiici ah, waxaana loo khasaariyey qashinkii shay la siidaayo ka dib markii la qoday.
In kasta oo dadaallo deg deg ah lagu gudajiro si loo fahmo loona ilaaliyo deegaanka siistemyada qoto dheer adduunka, waxaa si weyn lagama maarmaan u ah in laga fogaado fikradaha ka soo horjeedda iyo doodaha iyada oo ay tahay mas'uuliyaddeena kaliya ee ah in aan ilaalino oo aan ilaalino badda gudaha ah ee aan annagu leenahay.
Warbixinta EIA, tillaabooyinka looga hortagayo saameynta wasakhda badda ku yeelan karto deegaanka dabiiciga ah ee badda lama sheegin.
Saamaynta ay mareenku ku yeeshaan biyaha dhadhanka biyaha lama baarin muddadii ay kordheen baahida biyaha iyo saameynta isbedelka cimilada.
Baahida loo qabo mareenka ayaa kaliya lala xiriirinaayaa shixnadaha shilalka iyo shilalka. La'aanta cilmi-baaris cilmu-nafsiyeed, mid bulsho iyo mid dhaqaale.
Kaliya dhuuban oo ku wareegsan kanaalka ayaa loo muujiyey inay tahay degmo bulsho. Si kastaba ha noqotee, aagga ay saameyn ku leedahay ayaa ah Badda Marmara oo dhan iyo degsiimooyinka ku hareereysan. (Sözcü)
Xeebaha Badda Madoow
Warbixinta Tübitakın Kanal Istanbul